Miasa ve azithromycin ho an'ny Uti? - BALLYA
Posted on Desambra 31, 2020, Nataon'i Jason, Sokajy antibiotika
Inona ny azithromycin?
Inona no atao hoe UTI?
Ny antony mahatonga ny UIT
Azithromycin ho an'ny UTI
Antibiotika hafa ho an'ny UTI
Ahoana ny fomba hisorohana ny UTI?
Azithromycin ho an'ny uti dia misy fiatraikany ara-pitsaboana amin'ny aretin'ny lalan-drà, fa marobe ny marary no tsy mahalala firy ny aretin-kibo, ary tsy azon'izy ireo koa ny fahombiazan'ny Azithromycine. Hovaliako eto ambany ireo fanontaniana ireo.
Takelaka azithromycin, ny famantarana an'ity vokatra ity dia mety amin'ireto aretina manaraka ireto ateraky ny bakteria mora tohina: bronchitis, pnemonia ary aretina hafa azo avy amin'ny lalan-pisefoana ambany; aretin-koditra sy hoditra malemy; haino aman-jery otitis maranitra; sinusitis, pharyngitis, tonsillitis ary aretina hafa avy amin'ny taovam-pisefoana ambony Azithromycin afaka manafoana tanteraka ny Streptococcus oropharyngeal, saingy tsy misy angona momba ny fahombiazan'ny Azithromycin amin'ny fitsaboana sy fisorohana ny tazo rheumatic.
Azithromycin dia azo ampiasaina amin'ny aretin'ny taovam-pananahana tsotra vokatry ny Chlamydia trachomatis amin'ny aretina azo avy amin'ny lahy sy ny vavy. Azithromycin dia azo ampiasaina ihany koa amin'ny aretin'ny taovam-pananahana tsotra ateraky ny tsy fahazoana fanafody maha-zava-mahadomelina Neisseria gonorrhoeae sy chancroid naterak'i Duke dema Haemophilus.
Inona ny UTI?
Fantsona urinary ny otrikaretina (UTI) dia manondro ireo pathogens izay manafika mivantana ny lalan-dra, mitombo ary mihamaro ao amin'ny urine, ary manafika ny moka na tavy mivalona ka miteraka fahasimbana. Miorina amin'ny faritra samihafa amin'ny fanafihan'ny pathogen dia mizara pyelonephritis, cystitis ary urethritis izy.
Pyelonephritis dia antsoina koa hoe fihanaky ny lalan-dra, ary ny cystitis sy ny urethritis kosa dia antsoina hoe ambany lalànan'ny urinary aretina. Satria ny aretina dia tsy dia ferana amin'ny faritra iray amin'ny lalan-dra mandritra ny fahazazany, ary sarotra ny ahitana azy amin'ny klinika, dia matetika no antsoina hoe UTI tsy misy fanavahana. Araka ny soritr'aretina klinika, dia azo zaraina ho tsimokaretina urinary (UTI) sy bacteriuria asymptomatika.
Araka ny fanadihadiana nasionaly natao tany Chine tamin'ny 1982, dia 8.5% amin'ireo aretina ao amin'ity rafitra ity no voan'ny aretin-tratra urinary. Tamin'ny 1987, araka ny antontan'isa momba ny fisavana zaza amin'ny faritany 21 any amin'ny faritany 12.5 manerana ny firenena, ny UTI dia nahatratra XNUMX% tamin'ireo fanafihana urinary an'ny ankizy. Na olon-dehibe na ankizy, ny tranga misy ny vehivavy UTI amin'ny ankapobeny dia avo kokoa noho ny an'ny lehilahy, fa ny isan'ny lehilahy dia ambony noho ny an'ny vehivavy amin'ny zaza vao teraka na ny zaza vao teraka.
2. Soritr'aretina UTI
Zaza vao teraka. Ny soritr'aretina indrindra amin'ny rafitra, vokatry ny aretin'ny rà ny ankamaroany. Izy io dia miaraka amin'ny jaundice, bacteriuria amin'ny asan'ny maizina, tazo, tsy fahampian'ny hafanan'ny vatana, hoditra hatsatra, tsy fahampian'ny lanja, fandavana ronono, fivalanana, fahalainana ary fikorontanana.
Ao amin'ny zazakely sy ny ankizy kely, ny soritr'aretin'ny rafitra dia mafy, indrindra ny fanaintainan'ny kibo, fivalanana ary fandoavana. Ny tomany mitomany sy maimbo dia miseho mandritra ny fivalanana. Ny famoahana matetika dia mety miteraka dermatitis diaper marefo. Miseho amin'ny alina i Enuresis nefa tsy misy enuresis amin'ny voalohany.
Amin'ny ankizy, ny soritr'aretin'ny aretina urinary ambany dia ny fahasosoran'ny tatavia, ary ny aretin-kibo ambony dia aseho toy ny tazo, mangatsiaka, fanaintainana ambany, fanaintainana mihetsiketsika ao amin'ny faritry ny voa, ary ny halemin'ny zoro avo vodilanitra. dra cystitis vokatry ny Escherichia coli dia mety misy hematuria.
B. Fiverenana sy famerenana amin'ny laoniny
Ny famerenana dia midika fa lasa ratsy vetivety ny bacteriuria aorian'ny fitsaboana, ary miseho ao anatin'ny fotoana fohy (6 herinandro) ny bakteria pathogenika aorian'ny fijanonan'ny zava-mahadomelina, ary miseho ireo soritr'aretina. Ny areti-mifindra dia manondro aretina iray izay sitrana aorian'ny fitsaboana ary vokatry ny pathogen iray hafa manafika lava ny lalan-dra (matetika 6 herinandro) aorian'ny fampiatoana ny zava-mahadomelina.
C. Fihanaky aretina mitaiza
Ny fizotry ny aretina dia mihoatra ny 6 volana. Pyuria na bacteriuria dia mety hitranga tsy tapaka. Ny olona manana aretina maharitra dia mety tsy manana anemia, havizanana ary taraiky ny fivelarana.
3. Ny antony mahatonga ny UIT
Ny bakteria pathogenika rehetra dia mety miteraka UTI, fa ny ankamaroan'izy ireo dia bacilli Gram-négatif, toy ny Escherichia coli, Para Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa, ary vitsivitsy dia Enterococcus sy Staphylococcus. Ny Escherichia coli no pathogen mahazatra indrindra any UTI, manodidina ny 60% -80%. Ho an'ireo zaza vao teraka dia mijaly amin'ny UTI voalohany, ny zazavavy amin'ny sokajin-taona rehetra sy ny zazalahy latsaky ny herintaona, ny tena pathogen dia mbola Escherichia coli, raha amin'ny zazalahy mihoatra ny herintaona kosa, ny tena lehibe indrindra dia ny Proteus. Ho an'ny zazavavy 10-16 taona, ny Staphylococcus albicans dia mahazatra ihany koa, ary Klebsiella sy Enterococcus dia mahazatra kokoa amin'ny zaza vao teraka.
4. Fitsaboana UTI
Ny tanjon'ny fitsaboana dia ny hifehezana ireo soritr'aretina, hamongorana ireo otrikaretina, hanala ireo antony mahatonga ny predisposing ary hisorohana ny fiverimberenana.
Fitsipika mifidy antibiotika:
Toerana misy ny aretina: Ho an'ny pyelonephritis dia tokony hofidina ny zava-mahadomelina misy fatran'ny rà avo, ary tokony hifidy fanafody mifoka be ny urine cystitis.
Lalan'ny aretina: Ho an'ny aretina miakatra, zava-mahadomelina sulfa no safidy voalohany. Raha miharihary ny soritr'aretin'ny rafitra toy ny tazo na marary ny rà mandriaka, penisilinina, aminoglycosides na cephalosporins matetika no ampiasaina irery na miaraka.
Misafidiana antibiotika mifototra amin'ny kolontsain'ny fisotrony sy ny valin'ny fitsapana ny fahatsapana zava-mahadomelina, miaraka amin'ny fahombiazan'ny klinika.
Ny zava-mahadomelina dia tokony hanana fifantohana avo lenta amin'ny tavy voa, urine, ary ra.
Ireo zava-mahadomelina voafantina dia manana fahaizana mahery vaika mahery vaika ary fihanaky ny bakteria betsaka. Ny tsara indrindra dia ny fampiasana zava-mahadomelina bakteria mahery sy tsy mora-mamokatra.
Ny zava-mahadomelina izay kely fahasimbana amin'ny fiasan'ny voa.
Azithromycin dia taranaka macrolide vaovao antibiotika. Ny fiparitahan'ny bakteria dia lehibe kokoa noho erythromycine. Izy io dia misy fiantraikany mahery vaika kokoa amin'ny bakteria gram-negatif toy ny Neisseria gonorrhoeae noho ny erythromycin. Izy io koa dia misy fiatraikany mahery amin'ny Chlamydia trachomatis sy Ureaplasma urealyticum. Raha misotro ronono any an-trano ianao dia afaka manao izany koa i Ballya fitsapana macrolides hampahafantaro anao raha misy residu macrolides amin'ny ronono sotroinao.
Azithromycin voadoka am-bava tsara, miaraka amina fifantohana be amin'ny tavy, maharitra antsasaky ny andro (2 ka hatramin'ny 3 andro), ary mifantoka be amin'ny lalan-dra urogenital, prostate ary sela hafa. Noho izany, matetika izy io no ampiasaina amin'ny klinika mba hitsaboana ny Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis ary ny otrikaretina Urea Urogenital nateraky ny vatana voalohany.
Takelaka azithromycin dia ampiasaina hitsaboana aretina mifindra. Raha ny mahazatra, ny soritr'aretina dia hofoanana aorian'ny telo andro misesy, ary hamafisina ao anatin'ny telo andro. Toy izao ny fizotry ny fitsaboana sy ny fomba fampiasana azy: manaparitaka anaty rano ary atelina am-bava.
Olon-dehibe: Ho an'ny aretina azo avy amin'ny firaisana vokatry ny Chlamydia trachomatis na Neisseria gonorrhoeae, 1.0g fotsiny amin'ity vokatra ity no mila raisina am-bava indray mandeha. Fitsaboana aretina hafa: ny fatra total dia 1.5g, mizara telo fatra; 0.5g amin'ity vokatra ity dia nalaina indray mandeha isan'andro. Na ny fatra total dia mitovy, mbola 1.5g, makà 0.5g amin'ny andro voalohany, avy eo makà 0.25g an'ity vokatra ity indray mandeha isan'andro manomboka amin'ny andro faharoa ka hatramin'ny andro fahadimy.
Ny marary mijaly amin'ny aretin'ny urinary dia tokony tsaboina ara-potoana, fa mitandrema tsara amin'ny fanafody eo ambany fitarihan'ny dokotera, ary aza mampiasa fanafody raha tsy mahazo alalana, izay mety hanimba ny fahasalamana. Misotroa rano be dia be ary esory ny urethra hanamaivanana ny aretina.
Na izany aza, milaza ny dokotera sasany fa ny azithromycine dia tsy mandaitra amin'ny fitsaboana aretina azo avy amin'ny lalan-dra. Ny tsara indrindra dia ny mihinana cephalosporins sy levofloxacin. Raha tsy salama ianao dia tokony mankany amin'ny hopitaly hijerena ny fanao amin'ny urine ary hanaraka ny torohevitry ny dokotera. Misotroa rano be dia be foana ary miriaria bebe kokoa.
Azithromycin-ho an'ny UTI
Ireto antibiotika am-bava manaraka ireto dia matetika ampiasaina hitsaboana ny otrikaretina UTI tsotra (cystitis mahery): nitrofurantoin, fosfomycin, sulfamethoxazole-trimethoprim. Ny dokotera dia tokony misafidy antibiotika mifototra amin'ny tantaran'ny marary, ny karazana UTI, ny angona fanoherana ny zava-mahadomelina eo an-toerana, ary ny vidiny. Ny fanafody voalohany dia matetika no voafantina amin'ny nitrofurantoin, fosfomycin, ary sulfamethoxazole-trimethoprim. Rehefa tsy azo ampiasaina ny zava-mahadomelina voalohany, asidra amôxicillin / clavulanic ary cephalosporins sasany toy ny cefpodoxime, cefdinir na cefaclor no azo ampiasaina.
Fluoroquinolones, toy ny ciprofloxacin ary levofloxacin, dia matetika ampiasaina amin'ny UTI tsotra ihany koa. Na izany aza, ny FDA (Fitantanana ny sakafo sy ny zava-mahadomelina amerikana) dia mamporisika mafy ny hampiasana fanafody toy izany amin'ny areti-mifindra lehibe kokoa ary tokony hampiasaina raha tsy misy antibiotika mahazatra.
Ny fandinihana ny fiarovana nataon'ny FDA dia nahita fa am-bava sy tsindrona fluoroquinolones (antsoina koa hoe "quinolones") dia misy ifandraisany amin'ny voka-dratsy ateraky ny fihenan-tendrony, ny hozatra, ny tonon-taolana, ny hozatra ary ny rafi-pitatitra foibe. Ireo fanehoan-kevitra ratsy ireo dia mety hitranga fotoana fohy aorian'ny fitantanana mandritra ny herinandro maromaro aorian'ny fipoahana, ary mety maharitra.
Ny fluoroquinolones am-bava sasany dia mety ho an'ny aretina mikraoba sarotra kokoa, ao anatin'izany ny pyelonephritis sy UTI sarotra misy fidiran'ny prostaty. Ho an'ny fitsaboana ivelany amin'ny pyelonephritis tsotra dia azo ampiasaina ireto quinolones manaraka ireto: ciprofloxacin ary levofloxacin. Miankina amin'ny maodely fanoherana (> 10%), mety ilaina ny fatra voalohany amin'ny fanafody anti-bakteria maharitra (toy ny ceftriaxone) na ny doka aminoglycoside 24 ora.
Ampicillin ary amoxicillin, izay ampiasaina hitsaboana cystitis (aretina E. coli), dia misy tahan'ny fanoherana antibiotika avo lenta. Ny fanafody am-bava hafa miaraka amin'ny fiakaran'ny tahan'ny fanoherana dia misy ny sulfamethoxazole sy ny trimethoprim ary fluoroquinolones. Ny tahan'ny fanoherana ny cephalosporins am-bava sy ny amiaxicillin / clavulanate potassium dia matetika latsaky ny 10%, ary ny amiaxicillin / clavulanate potassium dia mbola azo ampiasaina ho safidy fanafody.
Ary ahoana ny amin'ny fiverimberenan'ny aretin'ny urinary matetika? Tao anatin'ny herintaona nanombohan'ny aretina azo avy amin'ny lalan-drà, 1/4 ka hatramin'ny 1/2 vehivavy no voan'ny UTI indray. Ho an'ny vehivavy toy izany dia ampirisihina hampiasa antibiotika prophylactically, ary hanao kolontsaina amin'ny urine na fitsapana sary ho an'ny fanadihadiana bebe kokoa. Ny fisafidianana antibiotika dia tokony hiankina amin'ny aretin'ny tsimokaretina teo aloha, ny fisian'ny zava-mahadomelina ary ny antony marary (toy ny allergy antibiotika sy ny vidiny). Antibiotika matetika ampiasaina amin'ny miverimberina UTI ampidiro ny sulfamethoxazole-trimethoprim, nitrofurantoin, cefaclor na cephalexin.
Ho an'ireo vehivavy postmenopausal voan'ny tsimok'aretina miverimberina vokatry ny fahamainana amin'ny fivaviana dia azo ampiasaina ho fitsaboana mahomby ny fivaviana estrogen. Safidy fitsaboana natolotra dia ahitana: peratra fivaviana estrogen, tsindrona takelaka fivaviana, na crème estrogen fivaviana.
Ny fitsaboana UTI tsy misy antibiotika dia matetika no tsy soso-kevitra. Ny aretin'ny lalan-dra (toy ny cystitis) aloha dia mety hiharatsy rehefa mandeha ny fotoana, ka mitarika aretim-po mahery vaika (pyelonephritis). Raha manana soritr'aretina ianao lalànan'ny urinary aretina, tsara indrindra ny mitady fitsaboana. Raha miahiahy ny vehivavy bevohoka fa voan'ny tsimokaretina urinary dia tokony hikaroka fitsaboana haingana araka izay azo atao izy ireo, raha tsy izany dia mety ho lehibe kokoa ny loza ateraky ny fiterahana lanja kely na ny zaza teraka tsy tonga volana.
Ny marary sasany dia mety mampiasa ranom-boankazo na cranberry ho fanafody any an-trano amin'ny aretin'ny urinary. Na izany aza, ranom-boankazo ho an'ny uti mbola tsy voaporofo fa mahasitrana aretina mikraoba ao anaty tatavia na voa. Amin'ny ankabeazan'ny tranga dia ny antibiotika no fitsaboana tsara indrindra amin'ny aretin'ny urinary. Miorina amin'ny angon-drakitra voafetra, ny fampitomboana ny fihinanana tsiranoka (toy ny rano), ny fisorohana ny spermisida ary ny fivalanana aorian'ny fanaovana firaisana dia afaka manampy amin'ny fisorohana ny UTI.
Ataovy madio ny vava. Ny olon-dehibe dia tokony hanasa ny vavony indray mandeha isan'andro, manova ny atin'akanjony matetika, mamafa ny lozisoa aorian'ny fihetsiky ny tsinainy, ary manalavitra ny fitondrana loto avy ao anaty loaka mankany amin'ny fanokafana urethral.
Tandremo ny fidiovana ara-nofo. Alohan'ny firaisana dia tokony diovina ny taovam-pananahana any ivelany. Raha ampiasaina ny fanabeazana aizana dia tokony diovina na diovina izy ireo. Tokony hikorisa indray mandeha eo aloha sy aorian'ny fanaovana firaisana. Ankoatr'izay, ajanony ny filokana, indrindra ny filokana amin'ny fitaovana, hisorohana ny aretina sy ny ratra amin'ny lalan-dra.
Sakano ny fisotrony. Rehefa maniry ny hiondrika ianao, hikotrana ara-potoana, aza tazomina ny urine, ary alao ny tatavia isaky ny alina alohan'ny hatory.
Esory ny mikraoba manafika. Misotroa rano mangotraka be dia be mba hampitomboana ny fivoahan'ny urine, amin'izay ny urine dia hanohy hamoaka ny lalan-dra, hamoaka bakteria sy poizina faran'izay haingana, ary hitandrina ny lalan-dra madiodio.
Ny fanamafisana ny fahasalamana ara-batana dia lafiny iray lehibe hisorohana ny aretin'ny lalan-dra.
Azithromycin ho an'ny uti dia mandaitra, saingy ny fahombiazany dia mety tsy ho majika toa ny noeritreretinay. Ary azithromycin dia an'ny antibiotika macrolide, noho izany dia matotra ny vokany. Raha sendra UTI dia tokony hikaroka fitsaboana ara-potoana ara-potoana ianao ary hihinana antibiotika atolotry ny dokoteranao.
NCBI: Ny vokatry ny azithromycin amin'ny Pseudomonas aeruginosa mitoka-monina amin'ny aretin'ny urinary mifandray amin'ny catheter
CDC: Fampidiran-tsakafo urine